Brexit: Aqlabiyadda Britain oo hadda jeclaan lahaa in lagu si jiro Midowga Yurub – Kasmo Newspaper
Brexit: Aqlabiyadda Britain oo hadda jeclaan lahaa in lagu si jiro Midowga Yurub
Updated - December 17, 2017 1:47 pm GMT
London (Kasmo), Dadweynaha Britain ayaa la moodaa in ay dib uga guranayaan ka bixitaankii Midowga Yurub iyada oo in ka badan kala bar (51%) u codeyn lahaayeen hadda in lagu jiro Yurub, halka 41% wali doonayaan in laga baxo.
Farqigaas 10ka dhibcood ee labada kooxood u dhexeeya waa midkii ugu weynaa ee soo baxa tan iyo aftidii 23kii Juun 2016kii, natiijaduna waxay ka soo baxday ra’yi ururin (Opinion Poll) dhowaan la qaaday.
Taas oo Wargayska The Independent uu u xilsaaray Shirkadda BMG Research ee fadhigeedu yahay Birmingham oo su’aalo weydiisay 1,509 qofood oo qaangaar ah, oo matali kara qaybaha Bulshada, intii u dhexaysay 5-8dii Disember.
Sharciga qabyada ah (Brexit Bill) ee Xukuumadda Theresa May soo gudbisay, kuna saabsan ka-bixitaanka Midowga Yurub waxaa ku cayiman taariikhda 29ka March 2019 in ay noqonayso maalinta laga baxayo Midowga Yurub.
Muddada sidaa loo cayimay ma jeclaysan mucaaradka iyo xildhibaanno badan oo Muxaafidka ka tirsan, oo u arka in la sii sheego taariikh go’an ay dhaawici karto mowqifka Britain ee wadaxaajoodyada Brussels, ama horseedi karto in aan la gaarin wax heshiis ahba.